Tsy ny fanasitranana rehetra no avy amin’ny Fanahy
"Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany tamin 'ny anaranao va izahay? ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia hambarako aminy marimarina hoe: Tsy mba fantatro akory hianareo hatrizay hatrizay; miala amiko, hianareo mpanao meloka." - Mat. 7:22,23.
Ilaintsika ny ho vita vatofantsika ao amin' i Kristy, miorim-paka sy mafy fototra ao amin'ny finoana. Miasa amin'ny alalan' ireo masoivohony i Satana. Misafidy ireo mbola tsy nisotro tamin'ny rano velona izy, dia ireo izay mangetaheta zavatra vaovao sy hafahafa, sy vonona mandrakariva hisotro amin'izay loharano mety hipoitra ho azy eny. Hisy feo re hanao hoe: "Indro, aty Kristy," na "Indro, ary" - Mat. 24:23, kanefa tsy tokony hino izany isika. Manana porofo tsy mety diso ny amin'ny feon'ny Mpiandry Marina isika, ary miantso antsika Izy mba hanaraka Azy. Hoy Izy: "nitandremako ny didin 'ny Raiko" - Jao. 15:10. Mitarika ny ondriny ho amin'ny lalan'ny fankatoavana amirn-panetren-tena ny lalan'Andriamanitra Izy, fa tsy mampirisika azy ireo velively mba handika izany lalàna izany.
"Ny feon'ny vahiny" dia feon'ny olona izay tsy nanaja na nankatò mihitsy ny lalana masina sy marina ary tsara. Maro ireo maneho sarintsarim-pahamasinana lehibe, ary mirehareha ny amin'ireo zava-mahagaga ataony eo amin'ny fanasitranana ny marary, kanefa tsy mijery akory io fenitra lehiben'ny fahamarinana io. Koa amin'ny herin' iza ary no anaovany ireo fanasitranana ireo?
Raha ireo izay nahatanteraka ny fanasitranana no vonona ny hanala tsiny ny fanaovany an-tsirambina ny lalan'Andriamanitra, noho ny amin'ireo fampisehoana fahagagana ireo, ka manohy miaina ao anatin'ny tsy fankatoavana, na dia manana hery hatraiza hatraiza aza izy, dia tsy midika izany fa manana ny hery lehibe avy amin'Andriamanitra izy ireo. Ny mifanohitra amin'izany fa hery manatanteraka fahagagana avy amin'ilay mpamitaka lehibe izany. Mpandika ny lalana moraly izy, ka mampiasa ny fitaovana tsirairay azony fehezina mba hampahajamba ny olombelona ka tsy hahita ny tena toetrany marina. Efa nampitandremana isika fa any am-parany any izy dia hiasa hanao famantarana sy fahagagana mandainga. Ary hanohy ireo fahagagana ireo izy mandra-pikaton'ny fotoam-pahasoavana, hahazoany maneho porofo amin' izy ireo fa anjelin'ny mazava izy fa tsy anjelin'ny maizina. — RH, 17 Nov. 1885.